ငါးဖမ်းသမားတွေ အချင်းချင်းသတ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားဘက် ခိုလှုံဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူတွေ ပြန်ပို့ခံရ
ငါးဖမ်းသမားတွေ အချင်းချင်းသတ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားဘက...
7 พ.ย. 2562 - 20:11 น.
မြောက်ကိုရီးယား ငါးဖမ်းသင်္ဘောတစ်စင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက တွေ့ရစဉ်
ငါးဖမ်းသင်္ဘောတစ်စင်းထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ငါးဖမ်းသမား ၁၆ ဦးကို သတ်ခဲ့သူတွေလို့ ယူဆရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ငါးဖမ်းသမား နှစ်ဦး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ရာမှာ သူတို့ကို တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက မြောက်ကိုရီးယားထံ ပြန်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီငါးဖမ်းသမား နှစ်ဦးဟာ စနေနေ့တုန်းက ရေပိုင်နက်မျဉ်းကို ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်မှာ တောင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ခါတိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာသူတွေကို တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ခိုလှုံခွင့် ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်မှာတော့ ဒီငါးဖမ်းသမားတွေဟာ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ်ပြုနေတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ပြောပါတယ်။
ညစ်ညမ်းဝက်ဆိုက်မှာ အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတွေ
လူမှောင်ခိုကူးခံရသူ အဖြစ်ကနေ ကိုယ်တိုင် လူမှောင်ခို ဖြစ်ခဲ့တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ
နိုင်ငံ ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာသူတွေထက် ရာဇဝတ်သားတွေအဖြစ် သူတို့ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက် ပြန်ပို့ခဲ့တာလို့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ပြောပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ငါးဖမ်းသင်္ဘော ရေပိုင်နက်မျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့အပြီး တောင်ကိုရီးယား ရေတပ်က သူတို့ကို ဖမ်းမိဖို့ အချိန် နှစ်ရက် ကြာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီငါးဖမ်းသမား နှစ်ဦးက သူတို့နဲ့ နောက်လူတစ်ယောက်ဟာ စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့ ဘင်္ဘောကက်ပတိန်ကို အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းက သတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ထုတ်ဖော် ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုးကားပြီး ယုန်ဟက် သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီနောက် သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ငါးဖမ်းသမား တွေကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် သတ်ခဲ့ပြီး အလောင်းတွေကို သင်္ဘောပေါ်ကနေ ပစ်ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစက အဲဒီငါးဖမ်းသမားတွေ နေရပ် မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်သွားခဲ့ကြပေမဲ့ သူတို့ထဲက တစ်ဦးကို ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှာ ရဲက ဖမ်းမိသွားတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်က သူတို့သင်္ဘောနဲ့ တောင်ကိုရီးယားဘက်ခြမ်းကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီငါးဖမ်းသမား နှစ်ဦးကို နှစ်နိုင်ငံ စစ်မဲ့ဇုန်ထဲက ပန်မွန်ဂျွမ်မြို့မှာ မြောက်ကိုရီးယားထံ ပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့
နိုင်ငံဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့အတွက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပြစ်မှု ကျူးလွန်ထားသူတွေကို ခိုလှုံခွင့်မပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့ အခြေစိုက် တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ဝန်ကြီးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်အရွယ် အဲဒီလူ နှစ်ဦးကို နှစ်နိုင်ငံကြား ပန်မွန်ဂျွမ် နယ်စပ်မြို့မှာ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရထံ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ ပန်မွန်ဂျွမ် နယ်စပ်မြို့မှာ တောင်ကိုရီးယားကနေ မြောက်ကိုရီးယားထံ ပထမဆုံးအကြိမ် တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား တရားခံလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ရေး သဘောတူထားချက် မရှိပါဘူး။
အာဇာနည်ကုန်းမှာ လာလုပ်ကြံခဲ့သူ မြောက်ကိုရီးယား လက်မရွံ့လူသတ်သမား
ရန်ကုန်က မြောက်ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင် ဘာကြောင့်ပိတ်ရ
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ နိုင်ငံဘက်ပြောင်း ခိုလှုံသူတွေဟာ တံခါးပိတ်ဝါဒ အာဏာရှင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ ပိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထံ ထွက်ပြေးလာသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံတာမျိုးဟာ သိပ်ကို အန္တရာယ် ကြီးလှပါတယ်။ တချို့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ဆိုရင် မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာ ကျည်ဆံတွေကြားကနေ နယ်စပ်ကို ခြေလျင် ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးလာကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲ ထွက်ပြေး ခိုလှုံလာသူပေါင်း ၁၁၂၇ ဦး ရှိတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာသူတွေဟာ တောင်ကိုရီးယား ထောက်လှမ်းရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာကို ခံရလေ့ ရှိပြီး အစိုးရရဲ့ ပညာပေးစခန်းတွေမှာ နေရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာမှ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲ နေထိုင်ခွင့် ရကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား အများစုဟာ မြောက်ကိုရီးယားကပ်လျက် နယ်စပ်ဒေသ အရှည်ကြီး ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကတဆင့် ထွက်ပြေးကြသူတွေ ဖြစ်ပြီး တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအကြား လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားတဲ့ စစ်မဲ့ဇုန်ကို ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးတာထက် အများကြီး ပိုလွယ်ကူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားကနေ ထွက်ပြေးလာသူတွေကို ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ထက် တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူတွေအဖြစ် တရုတ်အစိုးရက ယူဆထားပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို အဲဒီလူတွေကို နေရပ် မြောက်ကိုရီးယားထံ ပြန်ပို့လေ့ ရှိပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ငါးဖမ်းသမားတွေ အချင်းချင်းသတ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားဘက် ခိုလှုံဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူတွေ ပြန်ပို့ခံရ